November 3, 2020 - Babal Khabar
Nov32020 by बबाल खबरNo Comments
“श्रीमानको गोप्य अं’ग को आकार सानो भएको भन्दै सुनसरीकी यी युवतीले गरिन यस्तो, पुरा पढ्नुहोस।
एक सुन्दर परिवारका लागि श्रीमान र श्रीमतीको भावना मिल्न आवश्यक हुन्छ । विवाहपछि केही सम्बन्धहरु लामो समय टिक्न सक्दैनन् । यसका पछाडी धेरै कुराहरुले महत्व राख्ने गर्दछन् । सम्बन्ध वि'च्छेद हुने कारणहरुमा विचारको मेल नहुनु प्रमुख कारण हो भने अर्को समाज पनि हो । समाजमा केही कुरा लगाउने मान्छेहरु हुँदा पनि सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन् । तर सधै यस्तै कारणले गर्दा मात्रै सम्बन्ध नराम्रो हुनछ भन्ने हुँदैन । भिडियोको लागी तल थिच्नुहोला। “सन्तानका विषयमा पनि विवादहरु हुन्छन् ।जे सुकै भए पनि मुल कुरा भनेको विचार भावनासँग जोडिएर आउँछ । तर सुनसरीमा एक युवतीले विहे भएको ६ महिनामै श्रीमानको गोप्य अं'गको आकार सानो भएको भन्दै सम्बन्ध वि'च्छेद गरेकी छिन् । इनरुवा नगरपालिका २ कि ती युवतीले आफुले शारि'रीक सुख भो'ग नपाएको भन्दै सम्बन्ध वि'च्छेद गरेकी हुन् । “यहाँ मन मिल्यो तर जुन कुरामा मिलन हुनुपर्ने त्
बाबुराम भट्टराईले नेताहरूले उपचारका नाममा गर्ने करोडाैं खर्चलार्इ लियर भने यस्तो, पुरा खबर
जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उपचारका लागि राज्य कोषबाट लाखौं/करोडौं लिएकाहरुले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेता र पहुँचवालाको उप चारमा राज्यको चार अर्ब खर्च भएको विषयमा ट्वीटर मार्फत आफ्नो धारणा राख्दै भट्टराईले उप चारका नाममा राज्यकोषबाट लाखौं करोडौं लिने सबैले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्याग/वलिदानका उदाहरण बन्नुपर्ने शीर्ष नेतृत्वका व्यक्तिहरू नै निजी उप चारनिम्ति राज्यकोषबाट लाखौं/करोडौं लुट्न नलजाउनुले देश पछाडी परेको भट्टराईको तर्क छ। ” त्याग/वलिदानका उदाहरण बन्नुपर्ने शीर्ष नेतृत्वका व्यक्तिहरू नै निजी उप चारनिम्ति राज्यकोषबाट लाखौं/करोडौं लुट्न नलज्जाए पछि देश कसरी बन्छ?”,भट्टराईले ट्वीटर मार्फत प्रश्न गरेका छन्। उप चारनिम्ति राज्य कोषबाट जसले जे-जति लिएको छ, त्यो सम्पूर्ण फिर्ता गर्न भट्टराईको सुझाव छ। “हामी जोजसले लिएका छौं,तुरून्त
केहि वर्षमै सकिँदैछ पृथ्वीको सुन, कारण यस्तो छ, पुरा खबर पढनुस
लगातार आकाशिंदै गरेको र विश्वव्यापी म'हामारी कोरोना भाइ रसको कारण भएको म'न्दी पछि पनि मानिसहरूले सुन किन्न रुचि देखाइरहेका छन्। तर आकाशिंदै गरेको सुनको मूल्या देख्दा यो प्रश्न लगातार उठाइरहेको छ कि के सुन संसारको खानीबाट अन्त्य हुने वाला छ? के तपाईंले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि यदि पृथ्वीको सुन पूर्ण रूपमा सकियो भने के हुन्छ? विशेषज्ञहरु बीच केहि समय देखि सुनको अन्त्य बारे चर्चा चल्दै आएको छ। यस्तो अवस्थालाई पिक गोल्ड भनिन्छ अथवा त्यो अवस्था जब सुन खानीबाट सबै सुन निकाली सकेको हुनेछ। केही विज्ञहरूका अनुसार आज हामी त्यस चरणमा पुगेका छौं र सुन पनि कम हुँदैछ। वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल (डब्ल्यूजीसी) को एक रिपोर्ट अनुसार, २०१९ मा लगभग ३,५५१ टन सुन निकालिएको थियो। बीबीसीको रिपोर्टमा बोल्दै वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलका प्रवक्ता हन्ना ब्रान्डिटर भन्छिन् कि आउँदो वर्षहरूमा सुन खनन अझ क